अहिलेका कांग्रेस, कम्युनिस्टकै कारण देशमा अस्थिरता छ : अध्यक्ष यादव | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरमले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएपछि आन्दोलनरत दलहरु बीचमा नै केही मतभेदहरु बाहिर आइरहेको छ । जसले गर्दा जनतामा समेत केही अस्पष्टता देखिएको छ । यस अवस्थामा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका प्रेम गौतमले लिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
सँगै आन्दोलनमा होमिएका दलहरूलाई छाडेर निर्वाचनमा लाग्नुभयो, यसको रहस्य के हो ?
राजनीतिमा सतिप्रथा हुँदैन । एउटा गए अर्को पनि जाने । एउटा नगए अर्को पनि नजाने । सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना उद्देश्य, नीति, सिद्धान्तका आधारमा, मुलभूत राजनीतिको आधारमा चलेका हुन्छन् । दलहरूका फरक–फरक धारणा हुन्छन् । उहाँहरू पनि ढिलोचाँडो निर्वाचनमा आउनुहुन्छ । उहाँहरू निर्वाचनमा नआउने मुख्य कारण भनेको पार्टी नै दर्ता भएको छैन । उहाँहरूले निर्वाचन चिह्न छाता रोज्नुभएको छ । त्यो नै उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन । कुन चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने भन्ने समस्या छ । सरकारले निर्वाचन चिह्न दिने र हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने समय दिएको छ । त्यसको उपयोग गरे निर्वाचनमा आउनुहुन्छ ।
लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नुभयो र बीचमै छाडेर निर्वाचनमा होमिनुभयो नि ?
पहिलो कुरा, संविधान संशोधन निर्वाचनअघि पनि हुनुपर्छ, पछि पनि हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायतका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र पहिलो निर्वाचन संसद्को गर्ने हाम्रो माग थियो । संसद्को निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकार बन्छ । त्यसले राज्य पुनर्संरचनालाई सच्याएर प्रदेशको निर्वाचन गराउँछ । प्रदेश सरकार बन्छ । प्रदेश सरकारको मातहत स्थानीय तह राख्नुपर्छ । र, प्रदेश सरकारले नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँछ । यो नै संघीय प्रणालीको कुरा हो, विधिको कुरा हो । केही राजनीतिक दलहरूलाई विधि पनि पालना गर्नु नपर्ने, प्रणाली पनि मान्नु नपर्ने र इच्छाअनुसार चल्ने बानी भयो । इच्छाधारी प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक अहिले पनि सही बाटोमा गइराखेको छैन । दोस्रो, संविधान संशोधन मुलुकका लागि आवश्यक छ । संशोधन मेरो वा तपाईंका लागि होइन, सिंगो नेपाललाई आवश्यक छ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ । त्यो गरेर अगाडि बढ्ने दायित्व राज्यको हो । राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले आफ्नो दायित्व बुझेनन् । आफूले गर्नुपर्ने कार्य गरेनन् । त्यसको दोष उनीहरूकैमा जाने हो । विपक्षीमा रहेका हामीले त बाटो देखाइदिने हो । संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ । तर, दुईतिहाइ पुगेको छैन । दुईतिहाइ पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । दुईतिहाइ जहिले पुग्छ, त्यसलाई पास गराउनुपर्छ । अब आयो स्थानीय निर्वाचनको कुरा । स्थानीय निर्वाचन र त्यसलाई जोडेर हेर्नुभन्दा संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढेकाले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अर्को के छ भने स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा आयो । त्यो निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । एक चरणको निर्वाचन भइसकेपछि गरिन्छ । यसले सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूको बुद्धि पछि पलाउँछ भन्ने स्पष्ट देखियो । खास समस्या हामीमा होइन, उहाँहरूमा छ ।
अब सरकार गठन प्रक्रियामा तपाईंको पार्टी सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो सोच बनिसकेको छैन । यहाँ त ठेक्कापट्टामा सरकार चल्छ । ६ महिने, तीन महिले, नौ महिने म्यादी सरकार हुन्छन् । सरकार बनाउन, मुलुकलाई ब्रह्मलुट गर्न त यो बाटो सजिलो हो । तर, देश यसरी बन्दैन । सरकार पनि भागबन्डामा, निर्वाचन पनि भागबन्डामा, राजनीतिक नियुक्ति पनि भागबन्डामा, भ्रष्टाचार पनि भागबन्डामा, न्यायाधीश नियुक्ति पनि भागबन्डामा गर्ने प्रथा नै गलत हो । जुन प्रथा कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूले चलाए, त्यो प्रथा मुलुक र जनताको हितमा छैन भन्ने देखिन्छ । तर पनि उहाँहरूले सरकार बनाउँदा बन्ने हो, हटाउँदा हट्ने हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अब नयाँ सरकार त बन्नैपर्छ । अर्को प्रधानमन्त्री बनून्, हामीले किन त्यसमा भाँजो हालिदिनु । सरकार बन्न नदिने, देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने नियतका साथ हामी आएका होइनौँ । तर, हामी राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि खोज्छौँ । देश र जनताले त्यो पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो नै हाम्रो मूल सरोकारको विषय हो । अहिलेका कांग्रेस, कम्युनिस्टकै कारण देशमा अस्थिरता छ । अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै छ । जातीय, वर्गीय र सामाजिक संस्कारहरू यथावत् छन् । त्यसकारण उहाँहरूले गर्ने भनेकै सरकार बनाउने र ढाल्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने हो ।
देउवालाई भोट हाल्नुहुन्छ या अर्को कुनै उम्मेदवार खडा गर्नुहुन्छ ?
त्यो हेर्न बाँकी छ । को भोट माग्न आउनुहुन्छ । को–को उम्मेदवार बन्नुहुन्छ । अहिले अगाडि नै किन भन्ने । अहिले त उम्मेदवार नै भएका छैनन् । आज फलानोलाई भोट हाल्छौँ भनौँला, भोलि त्यो उम्मेदवार नै भइदिएन भने के गर्ने ? त्यसकारण हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौँ ।
नयाँ शक्तिसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुभयो, तर जनताले पत्याएको देखिएन नि ?
कसले कति जित्यो भन्ने हिसाबले मात्र हेर्नु हुँदैन । सिकन्दरले आधा संसार नै जितेका थिए । मर्ने वेलामा साढे सात फिट जमिन मात्र पाए । भारतका अन्तिम राजा बहादुर शाहले भारतमा आफूलाई गाड्ने जमिनसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । जिते त के जिते ? के गरिबी, बेरोजगारीलाई जित्न सके ? नेपाली जनताको अभावलाई जित्न सके ? असमानता र उत्पीडनलाई हटाउन सके ? पक्कै छैन । दोस्रो कुरा, कहीँ दुनियाँमा नभएको काम नेपालमा हुन्छ । ठूला पार्टीहरूको बीचमा सत्ता साझेदारी कहीँ दुनियाँमा हुँदैन । यहाँ त पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने, मिलेर सत्ता भागबन्डा गर्ने भएपछि चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँको परिणाम के आउँछ भन्ने त थाहा छँदै छ । तर पनि हामीलाई त्यति धेरै जनताले साथ दिएका छन् । हामीलाई जति भोट आएको छ, ती अत्यन्त प्रतिबद्ध भोट आएका छन् । त्यसले हिमाल र पहाडमा पनि हाम्रो जग खडा गरिदिएको छ । आउने दिनमा त्यो महल निर्माण भएर जान्छ । जनताले हामीलाई जे दिएका छन्, त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ । हामीले भविष्य हेरेका छौँ । एउटा शक्तिशाली प्रगतिशील पार्टी जसले उत्पीडन, विभेदलाई अन्त्य गरोस्, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादलाई स्थापित गर्न सकोस् । अर्कोतर्फ गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, अभावग्रस्त जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ लान सकोस् । यी दुवै कुराको समायोजन गरेर सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता नेपालमा छ । नेपालीलाई सुनिश्चित भविष्यतर्फ लैजाने पार्टी बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईंको पार्टीको एजेन्डा के ?
हाम्रा पहिलादेखिकै मुद्दा संघीयता, समावेशिता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, विभेदको अन्त्य, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन छँदै छ । यसका अतिरिक्त विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहको परिचालन गर्ने, स्थानीय स्तरबाट उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बाटो, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै विकासका आधारशिला खडा गरेर अगाडि बढ्ने नै हो । गाउँ र नगरको विकास, गाउँ र नगरवासीको समृद्धिका लागि निर्वाचनमा जाने र जनताको मत प्राप्त गरेर जनताको सेवामा लाग्ने हो । अर्कोतिर अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष त छँदै छ ।
कति जति जित्छौँ भन्ने छ ?
जनताले जति दिन्छन्, त्यति नै जित्छौँ ।
अनुमान गर्नुभएको होला नि ?
मैले ज्योतिष विज्ञान बढेको छैन । म त भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी हुँ । पियोर साइन्सको विद्यार्थी भएकाले काल्पनिक कुरा मैले पढेको छैन । जनताले दिएको जति जम्मै हाम्रा हुन्छन् । हामीलाई त्यही शिरोधार्य हुन्छ ।
कोही ४० प्रतिशत, कोही ५० त कोही ६० प्रतिशत दाबी गर्छन् नि ?
त्यसो त हामी सबै तहमा जित्छौँ भन्छौँ । त्यसरी भनेर हुँदैन । जनताले दिएको जति हामीलाई शिरोधार्य हुन्छ । र, तराईमा सबैभन्दा राम्रो पोजिसन हाम्रो आउँछ ।
राष्ट्रिय पार्टी निर्माणको अभियानमा लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय पार्टीहरू कतिको बाधक हुँदा रहेछन् ?
क्षेत्रीय पार्टी भनेको के हो ? राष्ट्रिय पार्टी भनेको के हो ? अराष्ट्रिय पार्टी भनेको के हो ? मैले त बुझेको छैन । राजनीतिशास्त्रमा मैले त्यस्तो पढेको छैन । मैले बुझेअनुसार नेपालका सबै पार्टी राष्ट्रिय हुन् । राष्ट्र भनेको जनता हुन् । जनताले चलाएका सबै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नै हुन्छन् । देशैभरि हुने र निश्चित भूभागमा केन्द्रित हुनेचाहिँ फरक पाटो हो । हामीलाई निश्चय पनि सहयोग नै भएको छ । हामीलाई कसैले कुनै बाधा गरेको छैन ।
Posted by admin on Jun 1 2017. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry